Dunida Duurjoogta ah - Ka akhri Manhwa, Manhua, Webtoon, Webcomics, Manga, Comics online
Dunida Duurjoogta ah
Dunida Duurjoogta ah Celceliska 2.7 / 5 ka mid ah 14
Waad aqrinaysaa Dunida Duurjoogta ah, cajiib ah manhwa.
Saddexdii sano ee la soo dhaafay, Kijin Lee wuxuu ku noolaa xoghaye Agaasime Jinheon Joo oo ka tirsan Xitec Trading iyada oo aan lahayn shaqsiyad ama rabitaan iyada u gaar ah - xitaa timo jariddu waxay u baahnayd oggolaanshihiisa. Iyada oo iibinta Xitec Group ay aad hoos ugu dhacayso, waxaa loo wareejiyay si ay u caawiso Maamulaha Guud, oo ay ilmo adeer yihiin Agaasimaha Joo. Maalinteedii kowaad waa la soo gaabiyey kadib markii Kanghyun Joo oo sakhraansan - oo ku labisan surwaal iyo kabo isboorti ah - ay cabitaan ku tuurtay. Shaqadeedu waxay ku xidhan tahay kartida ay u leedahay inay caawiso isaga iyo kooxda Xitec, laakiin agaasimaha guud ee aan sharciga lahayn ayaa laga yaabaa inuu caddeeyo inuu yahay caqabadda ugu weyn ee weli haysata.
Cutubka 42	September 30, 2021
Cutubka 41	September 30, 2021
Cutubka 40	September 30, 2021
Cutubka 39	September 30, 2021
Cutubka 38	September 30, 2021
Cutubka 37	September 30, 2021
Cutubka 36	August 17, 2021
Cutubka 35	August 10, 2021
Cutubka 34	August 6, 2021
Cutubka 33	July 28, 2021
Cutubka 32	July 28, 2021
Cutubka 31	July 28, 2021
Cutubka 30	July 28, 2021
Cutubka 29	July 28, 2021
Cutubka 28	July 28, 2021
Cutubka 27	July 28, 2021
Cutubka 26	July 28, 2021
Cutubka 25	July 28, 2021
Cutubka 24	July 28, 2021
Cutubka 23	July 28, 2021
Cutubka 22	July 28, 2021
Cutubka 21	July 28, 2021
Cutubka 20	July 28, 2021
Cutubka 19	July 28, 2021
Cutubka 18	July 28, 2021
Cutubka 17	July 28, 2021
Cutubka 16	July 28, 2021